साउन ८ भित्रै चीनबाट ४० लाख डोज खोप आउने, उडान तालिका सहित
साउन ८ भित्रै चीनबाट ४० लाख डोज खोप आउने (उडान तालिका सहित)
संवाददाता २१ असार २०७८, 10:36 am
काठमाडौं, २१ असार । सरकारले आउँदो साउन ८ गतेभित्रै ४० लाख डोज कोरोना खोप चीनबाट ल्याइसक्ने दावी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत उडान तालिका सार्वजनिक गर्दै चीनबाट ४० लाख डोज भेरोसेल खोप ल्याउन लागिएको जानकारी गराएका छन् ।
चीनबाट कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ल्याउनेसम्बन्धी उडान तालिका सार्वजनिक भएको छ । नेपाल एयरलाइन्सलाई उद्धृत गर्दै डा. भट्टराईले सार्वजनिक गरेको तालिकाअनुसार खोप लिन नेपाल एयरलाइन्सको विमान यही असार २४ गते बेइजिङ जाँदैछ । सार्वजनिक तालिकाअनुसार तीन पटकमा गरेर आउँदो साउन ८ गतेसम्म ४० लाख डोज खोप काठमाडौं आइपुग्नेछ ।
चिनियाँ कम्पनी सिनोफार्मसँग खरिद गरेको सवा २४ लाख डोज भेरोसेल खोप आगामी तीन साताभित्रै आइसक्ने भएको छ । पहिलो खेप खोप असार २५ गते काठमाडौं आइपुग्नेछ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिदबारे सिनोफार्मसँग सम्झौता भएको १८ असारमा बताएको थियो । जसका अनुसार खोप आपूर्तिका लागि असार २४ गते गएर २५ गते फर्किने छ । यस्तै असार ३१ गते उड्ने विमान साउन १ गते खोप लिएर फर्किने छ । तेस्रो तथा अन्तिम खेप लिन साउन ७ गते जाने विमान भोलि ८ गते फर्किने छ ।
स्रोतका अनुसार एक पटकमा नेपाल एयरलाइन्सको बिमानले ८ लाख ९ हजार ६०० डोज खोप ल्याउनेछ । यसअनुसार तीन खेलमा सवा २४ लाख अर्थात २४ लाख २८ हजार ८०० डोज खोप काठमाडौं आइपुग्नेछ ।
बाँकी १५ लाख ७१ हजार २०० डोज खोप लिन थप दुई फ्लाइट हुनेछ । त्यसको लागि फ्लाइटको मिति तय भएको छैन । सरकार–सरकार (जीटुजी) ननडिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट (गोप्य सम्झौता) गरेर खोप ल्याउन लागिएकोले यसबारेमा विस्तृत खुलाइएको छैन ।
40 लाख vaccine China बाट ल्याइने flight schedule NAC ले सार्वजनिक गरेको छ । अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप लगाउने उमेर समूहको निर्धारण र कार्य तालिका प्रकाशन गर्नेछ। थप खोप ल्याउने प्रयास पनि जारी छ । pic.twitter.com/GLgF0RMCAs
— Rajan Bhattarai (@Rajanktm) July 4, 2021